7 Days Weight Loss - Only Natural Way 0.0.7 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 0.0.7 လြန္ခဲ့ေသာ6လက
Application မ်ား က်န္းမာေရး & ႀကံ႕ခိုင္ေရး7Days Weight Loss - Only Natural Way
7 Days Weight Loss - Only Natural Way ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အားလုံးတစ်ဦးကိုမိုဘိုင်းအစားအသောက်အစီအစဉ်အဘို့အပလီကေးရှင်း, အစားအစာဒိုင်ယာရီ & ကျန်းမာချက်ပြုတ်နည်းများ၌တည်၏။7နေ့ရက်များအလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုမိုဘိုင်း App ကိုနှင့်သင်၏အလေးချိန်အရှုံးရည်မှန်းချက်များဖြည့်ဆည်း။
သငျသညျ7ရက်အတွင်းကိုယ်အလေးချိန်ချင်ပါသလား? သင်တစ်ဦးလေးလံတဲ့အစားအစာလူတစ်ဦးဖြစ်ကြပြီးရက်အနည်းငယ်အတွင်းအနည်းငယ်အလေးသွန်းလောင်းလိုသလား? သငျသညျရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းတက်ရောက်ရန်ကိုမဆို function ကိုသို့မဟုတ်ပါတီရှိသည်နှင့်သင်သင်အကြိုက်ဆုံးစားဆင်ယင်ဝတ်ဆင်ချင်ပါသလား? သငျသညျတစ်ပါတ်အတွက်သက်သာစေချင်ပါသလား?
ကိုယ်အလေးချိန် Diet အစီအစဉ်
ဒီ7ရက်အတွင်းကိုယ်အလေးချိန်အစားအသောက်များတွင်အစီအစဉ်တွင်ကျနော်တို့အလေးချိန်ဆုံးရှုံးများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးအစားအသောက်များတွင်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်သော General Motors ကအစားအသောက်သို့မဟုတ် GM ကအစားအသောက်အစီအစဉ်မိတ်ဆက်ပါပြီ။ ဒါဟာလုပ်သားများကျန်းမာအောင်နေဖြင့်လုပ်သားအင်အားကုန်ထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ အစားအသောက်များတွင်၏ရလဒ်များအထင်ကြီးခဲ့ကြ - မယ့်သီတင်းပတ်အတွင်းအလေးချိန်၏ 10 မှ 17 ပေါင်တစ်အရှုံး!
ဤအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်တို့ကို 15 ပေါင် (7 ကီလိုဂရမ်) အထိဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။
ဒီ app ကိုဧကန်အမှန်အလေးချိန်ချွတ်ရန်သင့်အားကူညီပေးပါမည်သည့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော features တွေရှိပါတယ်။
1. အဘယ်ကြောင့် GM ကအစားအသောက်, ကကူညီပေးပါမည်ကိုမည်သို့, ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနဲ့ကျော်လွှားရန်ခြေလှမ်းများ
3. Plan ကိုမနက်စာ, Mid-နေ့ကသရေစာ, နေ့လည်စာ, ညနပေိုငျးမုန်နှင့်ညစာစားသောက်သောအစားအစာတို့ပါဝင်သည်
ဒီတော့7နေ့ရက်များအလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုကို download လုပ်ပါနှင့် GM ကအစားအသောက်နှင့်၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားပါ။
7 Days Weight Loss - Only Natural Way အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
7 Days Weight Loss - Only Natural Way အား အခ်က္ျပပါ
vivo-api စတိုး 7.54k 5.97M
7 Days Weight Loss - Only Natural Way ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း7Days Weight Loss - Only Natural Way အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 0.0.7
ထုတ်လုပ်သူ Utility Expert
လက်မှတ် SHA1: 35:78:94:48:09:03:3E:FB:36:34:72:76:BF:63:E0:60:8B:23:A2:A9
ထုတ်လုပ်သူ (CN): utilityexpertservices
7 Days Weight Loss - Only Natural Way APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ